Donation at Dadeye Villages on 1 June 2008
According to the requirements from the situation in the ground, we have to plan to donate more villages in Dadeye Township.
We managed to donate the basic necessity things to the following villages on 1 June 2008
Kayin Ni Village
Mal Ga Nan Village
Kyone Ka Du Village
The detail distribution list here...
Fund for the above donation is mainly raised by the following teams:
Ma Su Kyi and friends from US
Myanmar Families from overseas
And other local donar distribute their kind contribution to complete the above donation.
Total donation and expenditure list here...
Posted by Helping Hands4NG at 1:56 PM No comments:
Donation at Dadeye Villages on 27 May 2008
According to the various circumstances, we changed our plan to donate to the following villages
Kyone Dat Village
Late Kyun Villge
We manged to distrubute the basic necessity things to above villages as per follwing list:
Fund for the above donation is mainly raised by the colleagues from The Global Fund getting through from cyclone relief funding. And other local donar distribute their kind contribution to complete the above donation.
Donation and Expenditure List
And we would like to appricate our local volunteer groups. They give their full corporation to our team in every donation project for Nargis Relief.
the volunteers from MIT
the Youth Volunteer Group from Bahan2Street
the Youth Volunteer Group from Sout Okkalapa and KabaAye townships
We would like to say special thanks to every donor who contribute in our activites.
Posted by Helping Hands4NG at 1:13 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 4:24 PM No comments:
We're now doing reconstruction works at Shwe Pyi Thar for the rest 59 Huts.
We'll update with photos for that activity more..
Fund for the rest 59 also provided from Cyclonerelief.wordpress.com
Posted by Helping Hands4NG at 4:21 PM No comments:
Our second activity of Reconstruction pilot 10 huts at Shwe Pyi Thar with Myanmar Cyclone Relief Funding, today 13th May 2008 - progress follow up photos are here.
Posted by Helping Hands4NG at 1:16 AM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 9:20 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:43 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:32 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:27 PM No comments:
ကူညီသောလက်များအနေနဲ့ ဖိုရမ်မန်ဘာများ၊ ဒီနှစ်ရဲ့အလှူရှင်များ သိထားတဲ့အတိုင်း ဒီနှစ်မှာ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ ပညာသင်ဆုပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ပညာသင်ဆု ရထားတဲ့ကလေးတွေဟာ လပတ်စာမေးပွဲတွေ ဖြေနေကြရပါပြီ။ ပညာသင်ဆုပေးတဲ့သူကပေး လှူတဲ့သူကလှူနေတဲ့ အနေအထားလေးမှာ ကျွန်မတို့ ကူညီသောလက်များအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ ပညာသင်ဆုရထားတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ တစ်လတစ်ကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး သူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
ပညာသင်ဆုရထားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် ဘာကျူရှင် ဘာဂိုက်မှမရှိဘဲ အဆင့်(၃)၀င်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကလေးကို ဆုချတဲ့အနေနဲ့ ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့က သူ့ရဲ့အားလပ်ရက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ထဲကို အလည်အပတ်အဖြစ်ပို့ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူသွားချင်တဲ့နေရာ၊ သူစားချင်တဲ့အစားအစာကို သူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ သမ္မတမှာ ရုပ်ရှင်ပြခြင်း၊ ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ထမင်းဆိုင်မှာ နေ့လည်စာကျွေးခြင်း၊ ဂျေဒိုးနတ်တွင် မုန့်နှင့်အအေးတိုက်ခြင်း၊ သူ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ပစာပေ ရွေးချယ်ဝယ်ယူစေခြင်းတို့ကို အလှူဒါန ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အလှူရှင်ကတော့ ဒေါ်သက်စုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အခြားကလေးငယ်များကိုလည်း အဆင့်၁၀အတွင်း ၀င်အောင်ကြိုးစားနိုင်လျှင် မိမိတို့အားလပ်ရက်မှာ မိမိတို့စိတ်ကြိုက်လည်ပတ်ခွင့်အဖြစ် ဆုချီးမြှင့်ရန်အတွက် လည်း ကလေးငယ်များကို အားပေးရင်း သူတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုရမ်မန်ဘာများအနေနဲ့ ဗော်လန်တီယာအဖြစ် ကျွန်မတို့အဖွဲ့နဲ့ မလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ အနေအထားလေးမှာ ယခုကဲ့သို့ ကလေးငယ်များကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်လို့ လှုပ်ရှားမှုပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။
Posted by Helping Hands4NG at 3:25 PM No comments:
ကူညီသောလက်များအနေဖြင့် ယခုပညာသင်နှစ်ဖြစ်သော ၂၀၀၇-၈မှာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများမှ ကလေးငယ်များကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပညာသင်ဆုများကို အလှူရှင်များကိုယ်စား လှူဒါန်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ကူညီသောလက်များအနေဖြင့် ထိုလှူဒါန်းမှုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အလှူရှင်၏ကိုယ်စား ကလေးငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကျောင်းပညာရေးကော်မတီနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ကျောင်းသား ရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းရဲ့ အဓိကရွေးချယ်မှု အချက်ကတော့ (၁)မိဘမဲ့ (၂)အမိမဲ့ (၃)အဘမဲ့ (၄)ဆင်းရဲနွမ်းပါးဆိုပြီး ဦစားပေးအဆင့်နဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပညာသင်ဆုအနေနဲ့ကတော့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ ထူးချွန်ကျောင်းသားကို အဓိကထား ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းများကတော့ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြင်သာမြို့ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နန်းဦးဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းနဲ့ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ဆင်ခြံရွာမှာရှိတဲ့ အောင်ဇမ္ဗူ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြင်သာမြို့ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ ကလေးငယ် ၂၅ ဦးကို ပြည်ပမှ အလှူရှင်တစ်ဦးက လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဦးဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှ ကျောင်းသား ခွန်ထွန်းကျော်(၈တန်း) ကိုတော့ မ၀င်းဝင်းခိုင်မှ လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဇမ္ဗူ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မယုဇနလှိုင် (၁၀တန်း)ကိုတော့ ညီမငယ် ဂျူဝယ်လ်မှ လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ညီမငယ် ဂျူဝယ်လ်က ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ အခြားလိုအပ်သော အလှူ လှူဒါန်းရန်အတွက် ကျပ်ငွေ ၂၅၆,၀၀၀ ကျပ်-လှူဒါန်း တာဖြစ်ပါတယ်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး(၂၀၀၇-၈ပညာသင် တစ်နှစ်စာ- ၁၀တန်း) ယုဇနလှိုင် ၂၁၀,၀၀၀ကျပ်
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး(ကျောင်းစတင်အပ်နှံခြင်း-၉တန်း) မောင်ဇော်မျိုးထွန်း ၃၀,၀၀၀ကျပ်
ဆန်တစ်အိန်(နန်းဦး ဘ/က ကျောင်း) ၁၆,၀၀၀ကျပ်
Posted by Helping Hands4NG at 3:23 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:22 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:20 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:15 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:12 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 3:10 PM No comments:
Posted by Helping Hands4NG at 2:57 PM No comments:
Posted by TKLinn at 2:20 PM No comments:
Posted by TKLinn at 8:43 PM No comments:
Posted by TKLinn at 8:37 PM No comments:
Posted by TKLinn at 6:56 PM No comments:
Posted by TKLinn at 6:53 PM No comments: